Nampitondra faisana ny eto an-dRenivohitra: jiolahy raindahiny 6 voasambotry ny polisy | NewsMada
Par Taratra sur 14/11/2019
Tsy afa-bela tamin’ny vela-pandriky ny polisy. Tratra ary hatolotra ny fampanoavana, rahampitso, ireo jiolahy mpampihorohoro ny Renivohitra sy tompon’antoka tamina fanafihana maro isan-karazany izay nahaverezana vola an-tapitrisany sy nahafatesan’olona.
Hatolotra ny fampanoavana, rahampitso, ireo jiolahy miisa enina tompon’antoka amin’ny fanafihana sy mpampihorohoro ny Renivohitra, izay voasambotry ny polisy, ny alatsinainy sy talata teo taorian’ny vela-pandrika rehetra natao. Voarohirohy amin’ireo fanafihana mitam-piadina nahafatesan’olona izy enin-dahy ireo raha namoy ny ainy nandritra ny fifampitifirany tamin’ireo mpitandro filaminana teny Amboanjobe ny fahafito, fantatra amin’ny anarana hoe Gorille. Fantatra amin’anarana hoe Lelandy, Mikakely, Ndaty, Dadafara, Boby ary Stefa ireo jiolahy ireo izay voalaza fa tompon’antoka amin’ny fanafihana mitam-piadina, nahaverezana vola 100.000.000 Ar tetsy Anosibe. Voarohirohy nanao ny fanafihana ny Compagnie Vidzar teny Anosizato, ny volana janoary teo izay nahaverezana vola 80.000.000 Ar ihany koa. Mbola isan’ireo nanao ny fanafihana sy famonoana pasitera tetsy Antohomadinika, ny volana janoary 2019. Nanafika ny Cash point teny Andavamamba, ny volana desambra 2018 izay nahaverezana vola 12.000.000 Ar ireo vatan-dehilahy ireo, ary isan’ireo nanao fanafihana nahafatesana olona, ny volana desambra 2016.
Taorian’ny vela-pandrika nataon’ny polisy, voasambotra teo Ampefiloha i Dadafara sy Boby, ny talata teo, izay fantatra fa nanao ny fahafihana niharo vono olona tamina lehilahy mpiasan’ny JB teny 67ha. Nohazavain’ny kaomisera Seraly Hercule, Directeur de Police Judiciaire, fa nandritra ny fisamborana an’i Dadafara no niantso ity farany ka nifanome fotoana taminy teny Analakely i Ndaty hanomana fanafihana ka niatrana teny an-toerana avy hatrany ny mpitandro filaminana nanao ny fanenjehana. Vokany, voasambotra ny lehilahy rehefa namaly tifitra tamin’ireo polisy. Ny harivan’io ihany, tratra teny Anosy koa i Stefa niaraka tamina basy miisa roa nifahana sy bala fito, izay voalaza fa nitifitra tovolahy iray teny amin’ny tetezan’i Bekiraro. Taorian’ny fanadihadiana, hoy ny polisy, efa any am-ponja ny namany sasany raha mbola karohina kosa ny hafa. Ny alatsinainy teo kosa no voasambotra teny 67ha i Mikakely, isan’ireo naman’i Lelandy, tompon’antoka tamin’ny fanafihana mitam-basy izay nahaverezana vola an-tapitrisany maro. Maty vokatry ny ratra nahazo azy nandritra ny fifampitifirana tamin’ny polisy teny Amboanjobe kosa i Gorille, naman’ireo jiolahy ireo ihany.
Mety mba hihena izany ny asan-jiolahy eto an-dRenivohitra noho ny fahatrarana ireto atidohan’ny mpanao fanafihana ireto.